Arctic wuxuu arkay sanadkiisii ​​ugu kululaa taariikhda la diiwaan geliyey | Saadaasha Shabakadda
Arctic wuxuu lahaa sanadkiisii ​​ugu kululaa taariikhda la diiwaan geliyo
Meerahu wuu kululaanayaa, laakiin meel walba si siman uma wada aha. Gudaha Arctic xaaladdu way xun tahay. Caddaynta tani waa warbixintii ay daabacday NOAA shirkii sanadlaha ahaa ee Ururka Isbahaysiga Juquraafiyiinta Mareykanka ee ka dhacay San Francisco.
Tiro dhan 61 saynisyahano ah oo ka kala socda 11 ummadood ayaa dhameystiray shaqadan dhameystiran, oo lagu soo bandhigay sawirro iyo khariidado muujinaya xaqiiqada dhabta ah ee Arctic.
1 Heerkulka Arctic: ku kacaya xawaare aad u sarreeya
2 Kordhinta koritaanka dhirta arctic
Heerkulka Arctic: ku kacaya xawaare aad u sarreeya
Gudaha Arctic-ka heerkulku wuu sii kordhayaa, iyo wax badan. Sawirka kore waxaad ku arki kartaa taas waxaa jiray kor u kac kaliya 2 darajo, halka adduunka intiisa kale celceliska heer kulku yahay 1,31ºC. Laba darajo uma muuqan karto wax badan, laakiin waxay noqon kartaa farqiga u dhexeeya lahaanshaha dhul gebi ahaanba daboolay barafka sanadka intiisa badan, taas oo lagu xisaabtamayo goobta juquraafi ahaan ay noqon doonto tan ugu macquulsan, ama dhirta
Gudaha Greenland luminta barafka waa mid aad u naxdin leh:
Qiyaastii 3000 gigaton oo baraf ah ayaa lumay sannadkan. Baraf dhalaalay oo dabcan ku dhammaanaya badda, taas oo keeneysa in heerkiisu kaco, halisna gelisa nolosha dhammaan dadka ku nool xeebaha ama jasiiradaha hooseeya.
Kordhinta koritaanka dhirta arctic
Marka heerkulku kaco oo barafku dhalaaliyo, waa in la fishaa in koriin badan ay yeelan doonto dhirta. Dhulka Arctic, xaaladaha saxda ah ayaa ka bilaabmaya dhirta inay koraan, sida aad ku arki karto sawirka kore.
Way fiicnaan kartaa, laakiin caadi maahan. Markay heerkulku sii kordhayo, waxaa jira xoolo badan oo dhibaato badan ka haysato quudinta, sida bahalada loo yaqaan 'polar bears', oo qatar ugu jira baabi'inta.
Haddii aad rabto inaad si buuxda u akhriso daraasadda, riix halkan (Waxay ku qoran tahay Ingiriis).
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » Arctic wuxuu lahaa sanadkiisii ​​ugu kululaa taariikhda la diiwaan geliyo
Muhiimadda ay leedahay badda Mediterranean sida saxanka iyo isha laga helo CO2
Isbahaysiga Cimilada ayaa soo jeedinaya sharci cusub oo ka dhan ah isbeddelka cimilada